Dowlad goboleedyada Puntland iyo Koonfur Galbeed oo heshiis ku gaaray magaalada Baydhabo +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Dowlad goboleedyada Puntland iyo Koonfur Galbeed oo heshiis ku gaaray magaalada Baydhabo...
Baydhabo (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni, ayaa xalay ka qeybgalay xaflad soo dhoweyn ah oo isaga iyo wafdigiisa loogu sameeyay xarunta Madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo.
Saciid Deni ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ku sugnaa magaalada Baydhabo, waxaana uu kulamo kala duwan la qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada.
Hadal jeedin uu Madaxweynuhu sameeyay waxaa uu sheegay in Puntland iyo Koonfur Galbeed ku heshiiyeen horumarinta iskaashiga, dhinacyada Amniga, ganacsiga, isdhexgalka Bulshada iyo dowlad dhiska, Iyadoo Puntland wixii aqoon dowladdnimo iyo shuruuc ah ku taageerayso Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa uga mahadceliyay Madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) iyo dhammaan dadka reer Koonfur Galbeed dowlad iyo shacaba sida wanaagsan ee isaga iyo wafdigiisa usoo dhoweeyeen.
heshiiska Puntland iyo Koonfur Galbeed